ရဲက ဖမ်းပေး တရားရုံးက လွှတ်ပေး တာမျိုး မဖြစ်စေချင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရဲက ဖမ်းပေး တရားရုံးက လွှတ်ပေး တာမျိုး မဖြစ်စေချင်
ရဲက ဖမ်းပေး တရားရုံးက လွှတ်ပေး တာမျိုး မဖြစ်စေချင်
- Mr. human
Posted by Mr. human on May 6, 2012 in Myanma News | 11 comments
ဧပြီ ၂၁ရက် နံနက် (၇ :၁၅ ) အချိန်တွင် နွား၁၄ကောင် ကိုတရားမ၀င် ရောင်းချရန်ခေါ်ဆောင် လာစဉ် ကသာမြို့နယ် အောက်ဝဲကြီးကျေးရွာ၌ ဖမ်းမိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
၎င်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တရားခံ ၇ဦး အား အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း ၊ သက်သေများစစ်ဆေးခြင်း ထိုပြစ်မှုအား ဥပဒေနှင့် အညီ တရားစွဲဆိုနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပြီး
(ပ)၁၂၈/၂၀၁၂ အရ အရေးကြီးကုန်ပစ္စည်း သယ်ဆောင်မှုပုဒ်မ ၈(၁) ၊၈(၃) အရ ကသာရဲစခန်းမှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း။ ( 7day new ဂျာနယ် မေ၃၊ ၂၀၁၂ စာ၁၇
ပန်းတနော်မြို့နယ်တွင် ကာလ အားဖြင့် ၃လ ကြာပြီ ဖြစ်သော အလားတူ အမှုကို ရဲက ဖမ်းဆီး ပေး၍ တရားစွဲဆို တင်ပြ ကာ တရားသူကြီး မှ စစ်ဆေး လျှက်ရှိသောပုဒ်မ ၈(၁) အမှု
ကို ယခု အခါ တရားခံ ဆန်းဝင်း အိမ်မဲ နေသူက နည်းမျိုးစုံဖြင့် ချည်းကပ် ခဲ့ ၍ ပုဒ်မ ၈(၃) ဖြစ်ကာ အာမခံဖြင့် ၎င်းက အမှုပွဲစားများလုပ်ခြင်း နွားဖမ်းခံရသူများကို သက်ဆိုင်ရာသို့ ၀င်ထွက်ပေးခြင်း
ဤသို့ အာဏပိုင် များဖြင့် ချည်းကပ် ပေါင်းသင်း ၍ လုပ်စားနေသော အဆိုပါ အမှု ၈(၁) နှင့် အာမခံဖြင့် လွှတ်ထားသူကို အမြန်ဆုံး စီရင် ချက် ချနိုင်ရန် နှင့် ထိရောက်သော ပြစ် ဒဏ် ပေးနိုင်ရန်ပြည်သူများက လိုလားလျှက်ရှိပါသည်။
တရားရုံး များသည် ငွေ ပေါ် အခြေတည်ပြီး ဆုံးဖြတ် ခြင်းကို ပြည်သူများက လည်း ၀ိုင်းဝန်း တပ်လှန့် နိုင်ရန် နိုးဆော် လိုက်ပါသည်။ငွေများ တရားနိုင် ကိစ္စ ပပျောက်စေရန် မီဒီ ယာ သမားများကလည်းဝိုင်းကူကြပါရန်။
( ယခင်တင်ထားသော ပန်းတနော် မြို့နယ် အမှုကို ကူးယူ ဖြည့်စွက် ထပ်မံ တင်ပြပါသည်။)
အရေးကြီးကုန်ပစ္စည်ျနှင့် ဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ – ၈ (၁)ဖြင့် ကျွဲများကို တရားမ၀င် သယ်ဆောင်ခြင်း အတွက် မြို့နယ် တရားရုံးသို့ တရားစွဲတင်ပို့ခဲ့ရာ
မြို့နယ် တရားရုံးမှ ထိရောက်ဟန့်တားသော ပြစ်ဒဏ်ကို ဥပဒျေနှင့် အညီ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။(ဧရာဝတီဂျာနယ် အတွဲ၁အမှတ်၂၄)
ယခုအခါ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတနော်မြို့နယ်တွင် ကျွဲနွားများတရားမ၀င် သယ်ဆောင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ _ ၈(၁) ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာအဓီက တရားခံ ကို
အာမခံပေး ၍ လွတ်ထားပါသည်။အမှုကြန့်ကြာနေသည့် အတွက် ပြည်သူများမှ အဆိုပါအမှုအားထိရောက်စွာ အရေးယူပေးနိုင်ရန် ဆန္ဒရှိနေပါကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
ကျောင်းကုန်းမှ ပန်းတနော်ကိုဖြတ်ကာ သားကောင် သတ်ပြီး အသားကားများ ညည့်နက်ပိုင်းတွင် ဖြတ်သန်း သွားလာ လျှက် ရှိနေပါသေးသည်။
ပန်းတနော်မြို့နယ် တရားသူကြီးမှ အမှုအား မှန်ကန်နစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရေးနှင့် အမြန်ဆုံး အရေးယူနိုင်ရေးကို ပြည်သူများက မျှော်လင့်လျှက်ရှိကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
About Mr. human
Mr. human has written6post in this Website..
View all posts by Mr. human →
ဟေ့ ဖရဲ လေး
ငွေများရင် တရားနိုင် ဆိုတာမျိုး ကို အကိုတို့ က တော့ လက်မခံနိုင်ပါ
တရားသူကြီး က တော့ …………………….လာထားနော်
ကျုပ်တို့ လက်ခံတာ၊ မခံတာ အရေးမကြီးဘူး..
အမိန့်ချမယ့် တရားသူကြီး လက်မခံဖို့ အရေးကြီးတာ..
အင်းရဲနေတာပဲ။ အားလုံးပြန်လိုက်စိမ်းပေးလိုက်တယ်။ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ မန့်ဖို့အရေးကို။ တရားရုံးမှာဥပဒေစိုးမိုးတယ်မစိုးမိုးတယ်တော့မသိဘူး။ ဒီမှာပြောမိတာလေးနဲ့ကိုပဲအားလုံး ရဲရဲတောက်နေကြတယ်။ တရားသူကြီးဘက်က နာနေတဲ့သူတွေရှိနေ တာထင်ရှားတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေးကိုမလိုလားကြသေးဘူးထင်တယ်။ ၀ါးတာမ၀သေးလို့။ မှန်တာပြောဒေါသထွက်ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်မယ်။ အော်မှန်တိုင်းလဲမကောင်း။
yoh. .. CJ ဗျို့ yoh ..CJ ဗျ…
ခရိုင် တရားသူကြီးအဆင့်လောက်က စပြီး
profile လေး ဆောက်ပြီး မော်နီတာရင်းလောက် လုပ်မယ့် NGO တွေ ပေါ်လာစေချင်ရဲ့ဗျာ…
ယနေ့လောကမှာ ဒေတာ ကိုင်ထားနိုင်သူသည်သာ နိုင်စမြဲတည်း ….
တရားရေး မဏ္ဍိုင် ခိုင်မာဖို့
အခု ဒီ ပို့စ်ကို တင်ရတာလည်း ဒီ ဆန်းဝင်းဆိုတဲ့ ကောင်က လူရှုပ်ပဲ
ဘာသာရေး အဖွဲ့ တွေကိုလည်း ဒုက္ခပေးတယ် ငွေ ပုံပေးပြီး အာဏာပိုင်ကိုပေါင်းတာပါ။
ရဲနဲ့ပေါင်းပြီး လူတွေကို ဒုက္ခပေး ဟိုတိုင် ဒီတိုင်လုပ်တယ်။ ပန်းတနော်တရားသူကြီးကိုလည်း သိန်း၅၀လောက်ပေးထားတယ် ပုသိမ်ဥပဒေအရာရှိကိုလည်းသိန်း ၅၀လောက်ပေးထားတယ် စုစုပေါင်း သိန်း၂၀၀ပေးထားတယ် အကုန် ပိတ်ဆို့ ထားတယ်လို့ သူက လိုက်ပြောနေတယ်။
အာမခံနဲ့ လွှတ်တယ်ဆိုပေမယ့် ပြစ်ဒဏ်က ရှိသေးတယ်လို့ မေးတော့ ဒဏ်ငွေ ပါလို့
ပြောတယ်။ သူပြောတာနော် လိုက်ကိုပြောနေတာ။
သူတို့ မှာ အဖွဲ့ရှိတယ် သူဋ္ဌေး တွေကို ကနောက်ကပေးခိုင်းတာ။ကုလား အယူသီးတွေ
အိမ်မဲမှာလည်း ခိုးမှုတစ်ခုကို သူတို့ ငွေပုံပေးပြီး အမှားက အမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်
မှန်မှန်ကန်ကန် ထွက် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်သရေ ရှိ လူကြီးတွေကို မတရား သက်သေဆိုပြီးငွေပေးပြီး
တရားစွဲဖို့ လုပ်နေတယ်ကြားတယ်။ဒိအကြောင်း ကို တိတိကျကျလေ့လာပြီးရေးပါ့မယ်။
ငွေများတရားနိုင် မဖြစ်ရလေအောင် အားလုံးဆောင်ရွက် ကြပါ ၀ိုင်းဝန်းကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ကြီးတဲ့အမှုငယ်စေငယ်တဲ့အမှုပပျောက်စေဆိုသလိုပေ့ါ ကြီးတဲ့အမှုလည်း မငယ်စေ ငယ်တဲ့အမှုလည်း မပပျောက်ယုံသာမက အမှုမှန် လမ်းမှန်နဲ့သာပြည်သူလူထုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ကျပါစေ